८१ वर्षिया महिला राष्ट्रलाई पुनः प्रयोगको प्रेरणा दिँदै |
८१ वर्षिया महिला राष्ट्रलाई पुनः प्रयोगको प्रेरणा दिँदै
प्रकाशित मिति :2017-06-27 15:18:18
लेबनानकी एक ८१ वर्षीया महिलाले आफ्नो गाउँको फोहोर बटुल्ने महिलाहरूको समूहलाई परिचालन गरेकी छन् । उनको यो कार्यप्रति आगन्तुकहरु उत्सुक छन् । सन् २०१५ र २०१६ मा पुरै नौ महिना बेरुटको सडकमा फोहोर थुप्रिएको थियो । त्यहाँ अहिलेपनि फोहोर राख्न खाल्डो नहुनुभनेको फोहोर समुन्द्रमा फाल्नु हो । उनै ८१ वर्षकी जेनब मकल्दले सरकारले गर्न चुकेको काम, गरेर देखाएकी छन् ।
‘फोहोर जताततै हुुन्थ्यो र बच्चाहरू फोहोरमा हुन्थे ।’ जेनब मकल्ड भन्छिन् । उनी सन् १९८० र ९० को समय सम्झिन्छिन् जब इजरायलले देशको उत्तरी भागलाई १५ वर्षसम्म कब्जामा राखेको थियो । यसले गर्दा उनको गाउँ अरब सलिममा फोहोर संकलन हुन बन्द भएको थियो ।
समय बित्दै जाँदा फोहोर थुप्रिदै गयो । क्षेत्रीय मोकल्ड राजपालको सहयोग माग्न गए । ‘तपाईँ किन चिन्तित हुनुहुन्छ ? हामी पेरिसमा छैनौ ।’ उनले मोकल्डलाई भने । ‘मैलै त्यही दिन थाहा पाएँ कि मैले आफैले केही थाल्नुपर्छ’ उनी भन्छिन् । मकल्डले गाउँका महिलाहरुसँग सहयोग मागे तर पुरुषहरुसँग सहयोग मागिनन् । उनी महिलाहरूलाई सशक्तिकरण गर्न चाहन्थिन् र उनीहरूले तुलनात्मक रूपमा राम्रो काम गर्छन् भन्ने उनलाई लाग्दथ्यो त्यसैले पुरुषको सहयोग मागेकी थिइनन् ।
फोहोरलाई पुनः प्रयोग गर्न छान्नु पथ्र्यो । जेनबलाई घर—घरमा यस्तो सन्देश पुरयाउने स्वयंसेवक चाहिन्थ्यो । तर, यो कामको लागि सन् १९९० को एउटा लबनिज मुस्लिम समुदायमा पुरुषहरू उचित हुदैन थियो । उनीहरूसँग कुनै पनि औजार वा भौतिक संरचना थिएन । कसरी सुरु गर्ने त ? मकल्डको साथी खदिजा फर्हातले आफ्नै पैसाले एउटा ट्रक किनिन् । मकल्डले आफ्नो घरपछाडिको बगौँचालाई पुनः प्रयोग गर्न सकिने फोहोर राख्ने भण्डार क्षेत्र बनाइन् । दश हजार गाउँलेहरूले आफ्ना फोहोर संकलन गरेबापत पैसा दिने कुरा ठिक नलागेपछि स्वयंसेवकहरु आफैले पैसा सङ्कलनमा राखे । अहिले १९ वर्ष पछि पनि पैसा राख्दै छन् जसमा ४६ जना सदस्य प्रत्येकले ४० डलर वार्षिक रूपमा राख्छन् ।
‘घरको फोहोर पुनप्रयोग गर्नु एउटा निकै राम्रो माध्यम थियो ।’ मकल्ड भन्छिन् । उनले संस्थाको नाम ‘कल् फर अर्थ’ राखेकी छन् । सुरुमा उनीहरूले ग्लास, कागज र प्लास्टिक पुनः प्रयोग गरे । हालसालै उनीहरूले विद्युतीय वेष्टलाई सङ्कलन गर्न थाले र उत्तरी लेबनन्को गर्मी र सुख्खापनबाट कम्पोष्ट बनाउन खोज्ने अनुसन्धानकर्ता खटाए । उनीहरूले ३ वर्षपछि स्थानीय अधिकारीबाट मात्र ३०० वटा प्लास्टिक प्लेट र फोहोर भण्डारणको लागि एक टुक्रा जमिन पाए । अनि मकाल्डले आफ्नो बगैंचा फिर्ता पाइन् । सोही समयमा उनीहरूले फर्हात नजिकै एउटा ट्रक भाडामा लिए र एउटा पुरुष चालक खटाए ।
१० वर्षपछि उनीहरूले ईटालियन राजदूतावासबाट वेर्हाउस बनाउन सहयोग पाए । जहॉ थुप्रै आगन्तुकहरु – स्कुले विद्यार्थी र सामाजिक कार्यकर्ता ‘कल् फर अर्थ’ कसरी चल्छ भनेर अध्ययन गर्न आउँछन् । जेनब मकल्दको सरल समुदायको पुनः प्रयोग प्रणालीले अहिले ध्यानाकर्षण पाइरहेको कुरा यस अर्थमा पनि अचम्म मान्नुपर्छ ।
क्याफम्र्यान्को एउटा गाँउका महिलाहरू आफैले सुरुवात गरे, जुन जेनबको जस्तो छ तर यसको रकम जम्मा गाँउलेहरुका माध्यमबाट भएको हो । जार्जुवा नजिकैको सहरमा पनि यस्तै प्रणाली अपनाउने निर्णय गरे । ‘तिमीहरूले धेरै बाधा–अड्चन्सँग सामना गर्नेछौ तर धैर्य र संकल्प हुनुपर्छ ।’ उनी भन्छिन् ।
उनकी पूर्व विद्यार्थी वाफाले उनको हात समाउँदै भन्छिन् –‘उनी एक प्रेरणाका पात्र हुन् । उनले कहिल्यै हार मानिन् ।’ मकल्दले अरबसलिमको सफासुग्घरताको विषयमा सुनिश्चितता गर्दा गर्दै आफ्नो अरब स्टडिजमा पि.एच्. डि. को लागि पनि समय निकालिन् । उनी केका लागि गर्व गर्छिन् ? जनमानसको दिमागमा पृथ्वीको हेरचाहका लागि हामी संसारको यस कुनामा बसेर जिम्मेवार हुनुपर्ने कुरालाई बिजयरोपण गर्नु हो । ‘हामीले गरेजस्तो अरबसलिममा सबैले गरे । फोहोरको समस्या लेबनन्मा कतै हुदैनथ्यो ।’